Waa maxay Hantida hadda jirta, noocyada, saamaynta iyo tusaalooyinka lagama maarmaanka ah | Dhaqaalaha
Hantida hada jirta
Susana Maria Urbano Mateos | | La cusboonaysiiyay 10/04/2019 10:12 | Dhaqaalaha guud
Dunida maaliyadeed ee ku shaqeysa nidaamka dhaqaale ee maanta adduunka ka jira, mid ka mid ah shuruudaha ugu muhiimsan ee maalgashadayaasha iyo ganacsatada nooc kasta leh waa hantida hadda jirta, oo sidoo kale loo yaqaanno hantida hadda jirta. Asal ahaan, hantida hadda jirta waxay ka kooban tahay hantida dareeraha ah ee shirkaddu leedahay taariikhda xiritaanka sanad maaliyadeed, iyada oo loo marayo ilaha sida: lacagta, bangiyada, iyo noocyada kala duwan ee hantida maaliyadeed ee muddada-gaaban. Sidoo kale, waxaa kale oo ka mid ah hantida loo beddeli karo lacag laba iyo tobanka bilood ee soo socda, taas oo ah, waxaa loo rogi karaa lacag caddaan ah hal sano gudahood, iyada oo loo marayo macaamiisha, waxa kaydka ah ama sidoo kale ka shaqeeya.. -maalgalin maaliyadeed oo ku meel gaar ah ama deyn ganacsi.
Soo koobid iyo ereyo fudud, hantida hadda jirta Waxaa lagu qeexi karaa hantida dareeraha iyo xuquuqda shirkad ama ganacsi, taasi waa, lacagta shirkadu yeelan karto isla markiiba.
1 Hantida hadda ku jirta qorshaha xisaabinta guud ee Isbaanishka
2 Isku dhafka hantida hadda jirta sida ku xusan Qorshaha Xisaabaadka Guud ee Isbayn
3 Xisaabaadka hantida hadda jirta waxaa lagu sifeeyay kuwa aan hadda ahayn
4 Isticmaalka raasumaalka shaqada ee hantida hadda jirta
4.1 Tusaalooyin kala duwan oo aan ka heli karno hantida hadda jirta
4.3 Khasnadda iyo lacagta
4.5 Xisaabaadka maaliyadeed
Hantida hadda ku jirta qorshaha xisaabinta guud ee Isbaanishka
Mar alla markii aan helno dariiqa ugu horreeya ee qeexidda qeexitaanka aasaasiga ah ee hantida hadda jirta ama hantida hadda jirta, waxaa lagama maarmaan ah in aan wax ka qabanno sida qalabkan loogu dabaqay ama looga tarjumay Qorshaha Xisaabaadka Guud ee Isbayn, maaddaama hay'addani ay ku jiraan hantida hadda ka jirta dhammaan hantida ku xiran wareegga hawlgalka caadiga ah, oo shirkaddu qorsheyneyso inay fuliso inta lagu jiro muddadaas. Guud ahaan, waxaa la aasaasay in wareegga hawlgalka ee caadiga ahi aanu ka badnaan karin hal sano, iyo marka laga eego aragtida shirkad kasta oo aan caddayn inta ay le'eg tahay wareegga hawlgalka caadiga ahi, markaa waxa loo qaadan doonaa in kani yahay hal sano oo laga fogaado dhammaan noocyada jahwareer ama mugdi ku saabsan.
Isku dhafka hantida hadda jirta sida ku xusan Qorshaha Xisaabaadka Guud ee Isbayn
Iyada oo ku saleysan qeexitaannada kala duwan ee Qorshaha Xisaabaadka Guud uu maareeyo, hantida hadda jirta waxay ka kooban tahay waxyaabaha soo socda:
Hantida meertada caadiga ah ee dhiig-miirashada loogu talagalay isticmaalkooda, iibintooda ama xaqiijinta.
Hantida aan ka sugeyno iibkooda ama xaqiijinta muddada dhow.
Xisaabtanka degdegga ah ee shirkadda, taasi waa, dhammaan lacagta, iyo sidoo kale hantida dareeraha ah ee la heli karo markii la doono.
Xisaabaadka hantida hadda jirta waxaa lagu sifeeyay kuwa aan hadda ahayn
Sida lagu aasaasay Qorshaha Xisaabaadka Guud, hantida hadda jirta waxaa lagu dhex daray noocyada xisaabaadka soo socda:
Hantida aan hadda jirin ee loo haysto iibka
Xisaabaadka macaamiisha iyo deynta.
Xisaabaadka Bangiga iyo keydka.
Maalgashiyada shirkadaha kooxeed iyo kuwa la xidhiidha muddada-gaaban
Maalgashiga maaliyadeed ee muddada-gaaban
Lacag caddaan ah iyo hanti dareere kale oo u dhigma
Isticmaalka raasumaalka shaqada ee hantida hadda jirta
Hantida shaqadu waa mid ka mid ah qalabka maaliyadeed ee ugu muhiimsan ee loo isticmaali karo in lagu maareeyo hantida hadda jirta si fiican. Hantida shaqeynta waxaa loo fahmi karaa inay tahay farqiga u dhexeeya hantida hadda jirta iyo deymaha hadda jira. Asal ahaan waxay ka kooban tahay qaybtaas hantida hadda jirta oo lagu maalgeliyo deymo aan hadda jirin. Si kale haddii loo dhigo, waxay ku saabsan tahay hantida dareeraha ah ee lagu maalgeliyo ilaha muddada-dheer. Sidaa awgeed, waxaa la dhihi karaa raasamaalka shaqadu wuxuu ka kooban yahay dheeri oo ka yimaada hantida hadda jirta shirkad, taas oo laga xisaabin karo laba qaacidoon oo kala duwan:
Hantida shaqo = Hantida hadda jirta - Waajibaadka taagan
Hantida shaqaysa = (Sinnaanta + Waajibaadka aan hadda jirin) - Hantida aan hadda jirin
Tusaalooyin kala duwan oo aan ka heli karno hantida hadda jirta
Kayd ama keyd
Kuwa ku jira khasnadda iyo lacagta.
Daynta lagu ururinayo mudo kayar laba iyo toban bilood.
Maalgashiga maaliyadeed ee la qoondeeyay muddo ka yar laba iyo toban bilood.
Tusaalooyinka aan ka heli karno hantida hadda jirta ee ku jirta alaabooyinka waa kuwo fara badan oo aad u kala duwan. Asal ahaan, halkan waxaan ka heli karnaa dhammaan hantida la taaban karo ee hantida hadda jirta, sida: badeecooyinka ama badeecadaha la iibinayo ee sugaya, taas oo dabcan, ay noqon karto noocyo fara badan, iyadoo ku xiran nooca shirkadda. Sidoo kale, waxaan sidoo kale ka heli karnaa aaggan, qaybaha ay ka kooban tahay geeddi-socodka wax soo saarka kala duwan ee shirkaddu, sida: alaabta ceeriin, weelasha, mashiinnada wax soo saarka, iyo alaabooyinka horay loo dhammeeyay ama dhammeeyay. Dabcan, astaantan ayaa in badan la jaan qaada shirkadaha waaweyn ee aan iibin oo keliya alaabta, laakiin sidoo kale soo saara. Sida ugu habboon, saamiyada waxaa loo qaybin karaa maamulka iyo maareynta sida soo socota:
Kaydka ganacsiga: Waxay si gaar ah ugu saabsan tahay dhammaan badeecadaha laga helo alaab-qeybiyeyaasha kale iyadoo ujeedadu tahay in si toos ah gadaal looga sii iibiyo goor dambe, sidaa darteed uma baahna wax is-beddel dheeri ah oo dheeri ah.
Qalabka ceeriin: Alaabta ceeriin waxay u dhigantaa dhammaan badeecadaha, iibsashada ama ilaha ay heli karto shirkadda si ay u fuliso geeddi-socodka isbeddelka warshadaha oo ay ku soo saarto alaabteeda ugu dambeysa.
Qalabka kale: Qaybtani waxay ka kooban tahay badeecado iyo alaabooyin ay shirkaddu u isticmaasho inay ku ilaaliso hawl-galkeeda, kuwaas oo aan ka heli karno waxyaabaha soo socda: agabyo kala duwan, shidaal, agab ay soo saartay dhinac saddexaad oo loo adeegsado geeddi-socodka isbeddelka ku xiga, qalabka dayactirka, weelasha, xafiiska, baakadaha, iwm
Alaabooyinka socda: Kuwani waa badeecado ku jira geedi socodka lagu beddelayo taariikhda dheelitirka, laakiin aan ahayn alaabooyin dhammeeyey ama qashin ah.
Semi-dhammeeyay alaabta: Sida magaceedaba ka muuqata, kuwan oo dhammi waa alaabooyinka ay soo saartay shirkaddu, laakiin aan weli dhammaysan hawshooda wax soo saar ee u gaarka ah, sidaa darteed weli lama iibin karo illaa ay dhammaystiraan hawshooda wax soo saar.
Alaabta la dhammeeyay: Dhammaantood waa badeecooyin dhammaystiray hawshooda wax soo saar oo diyaar u ah iib.
Wax soo saarka, qashinka iyo qalabka la soo helay: Iyagu waa kuwa qiimaha iibka qaarkood loo aanayn karo, sidaa darteed iyagana sida caadiga ah waa lagu xisaabtamaa inkasta oo ay haddaba leeyihiin qiimo iib iib ah.
Khasnadda iyo lacagta
Khasnadda waxay ka kooban tahay dhammaan lacagta dareeraha ah ee aan gacanta ku hayno, taas oo ah, waa lacagta aan isla markiiba isticmaali karno, oo lagu heli karo dhacdooyin kala duwan, sida kuwa soo socda:
Bangiyada iyo hay'adaha kala duwan ee amaahda.
Maalgashiyo muddo-gaaban ah oo dareerayaal badan leh.
Marka la eego maalgashiga muddada-gaaban, si ay ugu hoggaansamaan astaamahan gaarka ah, waa inay ahaadaan kuwa caadi ah maamulka ganacsiga, si fudud loo heli karo, taas oo ah, waxaa loo rogi karaa lacag caddaan ah wax ka yar saddex bilood., iyo in ay tahay raasamaal amaan ah ama si kale loo dhigo, taas oo aan soo bandhigin khataro si ba'an wax uga beddeli kara lacagta la geliyay.
Shaygaani wuxuu ka kooban yahay dhammaan deymaha lagu galay qandaraaska shirkadda, taas oo ah, deynta iibsadayaasha badeecadaha iyo adeegyada ay bixiso shirkadda, iyo sidoo kale amaahda ganacsi ee la filayo in la ururiyo muddada gaaban, kuwaas oo asal ahaan ka soo jeeda waxqabadka wax soo saarka ee hay'adda ganacsiga, oo lagu daro hoosaadyo hoose oo ku jira kiisaska soo socda:
Macaamiisha: Tani waa lacagta lagu dalaco qaansheegadka la soo saaray loona diray si loo maareeyo aruurinta alaabada iyo adeegyada macaamiisha. Kharashyadan waxaa la bixin doonaa marka lacag bixinta ugu dambaysa la bixiyo.
Hawlaha warshadaynta: Tan waxaa ka mid ah dhibcaha loo qoondeeyay xaqiijinta, iyadoo shardi ah in shirkaddu fuliso halista iyo faa'iidooyinka dadaallada ururinta.
Gacan-yarayaasha: Waxay ka dhigan tahay deynta macaamiishaas kuwa ka tirsan shirkadaha iyo kooxaha la xiriira, taas oo, maadaama ay ka tirsan yihiin isla koox wax soo saar leh, ay yihiin macaamiil noocyo kala duwan leh.
Iyagu waa hantida muddada-gaaban gebi ahaanba dareeraha ah, taas oo ah, lacagta caddaanka ah ee soo gelaysa ama ka baxaysa mar walba iyada oo qayb ka ah wax-soo-saarka wax soo saarka iyo ganacsiga, kaas oo u dhigma xuquuqda iyo waajibaadka dabeecad dhaqaale ee lagu xallin karo muddada ka yar hal sano, waxaana lagu soo bandhigaa qaybaha soo socda:
Maalgashiga maaliyadeed ee muddada gaaban ee dhinacyada la xiriira
Maalgashiyo kale oo maaliyadeed oo muddo-gaaban ah
Koontooyinka kale ee aan ahayn bangiga
Sidii aan ku aragnay qodobkaan oo dhan, hantida hadda jirta, oo sidoo kale loo yaqaanno hantida hadda jirta, ayaa ka mid ah waxyaabaha lagama maarmaanka u ah maareynta maaliyadeed ee shirkad kasta. Sidan oo kale, waxaan ku baranay inaysan muhiim ahayn oo keliya in la ogaado sida loo maareeyo deynta shirkadda, laakiin sidoo kale, iyo laga yaabee xoog badan, kheyraadka degdegga ah ee la heli karo, maxaa yeelay haddii aan haysanno fikrad cad xisaabtanka waxa ay shirkaddu leedahay, way adag tahay in la soo saaro istiraatiijiyad dhaqaale oo muddo dheer ah taas oo lagu gaari karo koboc ganacsi oo joogto ah. Si la mid ah, si loo qorsheeyo dhibcaha ay shirkaddu u baahan tahay, waa lagama maarmaan in la ogaado haddii ay haystaan ​​ilaha lagama maarmaanka u ah dejinta xadka deynta qaarkood. Haddii kale waxay khatar weyn ku tahay xasiloonida shirkadda inay ku dhiirato inay codsato amaah iyo dhibco, iyada oo aan la ogeyn haddii ay leedahay lacag kaash ah oo ku filan oo lagu daboolayo lacagaha iyo bixinta lacagaha la codsaday bilowgii.
Ogaanshaha khilaafaadka noocee ah hantida ay leedahay shay kasta oo shirkadeed, waxay ka kooban tahay qalab xisaabeed aad u awood badan. Labadaba inaad gaarto go'aan iyo inaad iska ilaaliso waxyaabaha layaabka leh, taasi waa sababta aan kugula talineyno inaad dhex gasho mawduuca.
Waa maxay hantida iyo deymaha
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Hantida hada jirta
Qoraal wanaagsan, runtii waan ka helay.
Fernando Martínez Gómez-Tejedor, oo ah ganacsadaha ugu fiican adduunka, wuxuu barayaa koorsooyinka istiraatiijiyadeed ee loo maro Facebook, oo ka kooban saddex heer, gebi ahaanba bilaash ah.
Waa maxay canshuurta Tobin?
Dhibcaha si loo abuuro shirkaddii ugu horreysay